कलाकारहरुले भने: रवि प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन होस् ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
कलाकारहरुले भने: रवि प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन होस् !
२०७६ भाद्र ७ गते शनिवार
काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कलाकारहरूले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित विशेष अन्र्तक्रियामा बोल्दै उनीहरूले लामिछानेलाई छानबिनको माग गरेका हुन् ।
कलाकार दिपकराज गिरीले कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले रविको पक्षमा ठूलो समर्थन रहेको बताउँदै आक्षेप लगाउने मानिस सत् प्रतिशत सत्य नहुने बताए । ‘उहाँको पक्षमा ठूलो समर्थन छ । चासो छ । अहिले हामीले कानुन संशोधन गरेका छौं, गिरीले भने, ‘म त कानुनमै दोष देख्छु । आक्षेप लगाउने मान्छे सत्प्रतिशत सत्य हुँदैन् । कानुन सुधार गर्नुपर्छ ।’
कलाकार निखिल उप्रेतीले नेपाली झण्डामुनि बसेर सत्य बोल्ने मान्छेले नेपालमा दुःख पाउने बताए । उनले पछिल्लो समय मानवता खत्तम भएको र सत्यता हराएको बताए । ‘रविजी त पपुलर हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो आवाज प्रष्ट भनिरहेका छन् । कानुनको व्याख्या नै गलत छन् भने कानुनले कसरी काम गर्छ रु उप्रेतीले प्रश्न गर्दे भने, ‘नेपाली झण्डामुनि बसेर काम गरौं । रविजीलाई मात्रै होइन, यहाँ स्वतन्त्र रूपमा सत्यको पक्षमा लड्नेमाथि यो अवस्था सिर्जना गरिन्छ । क्राइम गरेको व्यक्तिलाई डर हुन्छ । हामीले लड्नुपर्ने यसको विरोधमा हो । हामी रविजीको पक्षमा एकजुट हौं । धेरै विश्लेषण नगरौं ।’
कलाकार रमेश उप्रेतीले रवि पक्राउ प्रकरणमा छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘म रविजीको साथी हो । छिटोभन्दा छिटो छानबिन होस् । निष्पक्ष होस् । यो देशमा अदालत छ । श्रीमान हुनुहुन्छ । प्रेसर दिएर राम्रो निर्णय ल्याउँदैन् ।’
कार्यक्रममा कलाकार निर्मल शर्मा ‘गैंडा’ ले पनि रवि निर्दोष रहेको भन्दै भोलि हुने विश्वस दिलाए । अर्का कलाकार अनुराग कुँवरले रविले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रेमको चर्चाविच नीता र हरिहरको होली
जनयुद्धको कथा बोकेको गोली लाग्यो नि गित सार्वजनिक
पार्टीको बिवाद बिचमा हामी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक